Indlu ye-Lada:: Igumbi elincane - I-Airbnb
Indlu ye-Lada:: Igumbi elincane
ตำบล สวนดอก, ลำปาง, i-Thailand
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Siriwattana
I-Private Room ibungazwe ngu-Lada House, i-boutique guesthouse kanye negalari yezandla, ephethwe ugogo u-Lada, owayenguthisha wezandla wase-Thai kanye nendodakazi yakhe. Lapha ungazizwa ukhululekile njengekhaya lakho ngoba uphathwa njengelungu lomndeni, ukhululekile ngezinto eziluhlaza nezobuciko
Uma uthanda ukuhlala okunethezekile lapho kuzungeza indawo yemvelo futhi kufudumele njengokuhlala nomndeni. ILada House iyindawo yokuhlala engcono kakhulu kanye negalari yezandla etholakala ku-yolk yedolobha laseLampang. Nawa amakamelo angu-6 ahlukene. "Igumbi eliphephuli" yileli eliphansi eliphansi elinombhede onsomi, usayizi wendlovukazi nazo zonke izinto eziyisisekelo. Leli gumbi elihlotshiswe nge-vintage yesimanje, impushana enemibala exubile esitezi esikhonkolo nasodongeni.Uphahla oluphezulu lukwenza uzizwe unomoya futhi unethezekile.
ILampang yisifundazwe esincane esisenyakatho yeThailand, esineminyaka engaphezu kwengu-1,300 ubudala. Kunobufakazi obucebile bemivubukulo obubonisa impucuko yasendulo yaseLanna, eBurma kanye nokushintsha kokuchuma ngemva kokuhlangana ne-axis eyinhloko yaseThailand. Kugcinwa ubufakazi obuningi obungakwazisa futhi bufunde indlela yokuphila esikhathini esidlule. Nakuba isikhathi sihamba, idolobha lethu libonakala limile ukuze libonise ubuhle bendawo yasendulo. Heha abantu abaningi ukuthi bafinyelele futhi bachithe isikhathi lapha.
Ungahlala uxhumane noma nini lapho kudingeka usizo ngoba sihlala lapha, nathi. Ngaphezu kwalokho ungazizwa ukhululekile ukuhlanganyela nathi emisebenzini eminingi mayelana nokwenza.
Hlola ezinye izinketho ezise- ตำบล สวนดอก namaphethelo